Single iyo Dual biiyaha buufiyo - Shiinaha ZhongPeng dhoobada Gaarka ah
RBSC (SiSiC) nozzles desulphurization yihiin meelaha ugu muhiimsan ee nidaamka desulphurization gaaska qiiqa ee Quwadda kaamerada, iyo dharyo sugan waaweyn. Waxaa si weyn loo rakibo nidaamka desulphurizaiton gaaska qiiqa ee dhirta badan awood kaamerada, iyo dharyo sugan waaweyn.
biiyaha jihada Single
In dunida 21aad warshadaha qarnigii ballaaran ayaa wajihi doona dalabaadka kordhaya ee ka nadiifsan, hawlaha ku ool ah.
Shirkadda ZPC waxaa ka go'an in qabanayaan our qayb si ay u ilaaliyaan deegaanka. ZPC takhasusay design biiyaha lagu buufiyo iyo hal-abuurka farsamada ee warshadaha gacanta sumaynta. Iyada oo hufnaan biiyaha buufiyo sare iyo isku halaynta, qiiqa hoose sun galay our hawada iyo biyaha ayaa hadda la gaarey. naqshado biiyaha ka xoogbadan, BETE ee kasoo muuqan deeruhu hoos biiyaha, fiicnaaday hannaankii lagu buufiyo qaybinta, nolosha biiyaha dheeraado, iyo isku halaynta kordhay iyo hufnaan.
Tani biiyaha sare hufan saarta dhexroor yar qoyaanka cadaadiska ugu hooseeya taasoo keentay in looga baahan yahay awood hoos u shubto.
ZPC uu leeyahay:
• line The ballaran ee nozzles aarayo oo ay ku jiraan naqshado fiicnaaday xidhmin u adkaysta, xaglo ballaaran, oo kala duwan oo dhamaystiran oo qulqulka.
• kala duwan A buuxda oo ka mid ah naqshado biiyaha caadiga ah: tubada tangential, nozzles disk dhici, iyo nozzles taageere, iyo sidoo kale nozzles atomizing hawada yar iyo-socodka sare ee demin iyo codsiyada ku rugto qalalan.
• awooda qabanin inay qaabeeyaan, soosaarka iyo samatabbixin nozzles habka. Waxaan kaala shaqayn si loo daboolo shuruucda dowladda adag. Waxaan la kulmi kartaa shuruudaha gaarka ah, kaa caawiyo inaad gaarto waxqabadka nidaamka si mug leh.
Description kooban oo FGD Scrubber Zones
In qaybtan ka mid ah scrubber ah, gaasaska kulul qiiqa waxaa la dhimay ee heerkulka ka hor intaadan gelin ku-scrubber pre ama absorber. Tani waxay ka ilaalin doonaan wax kasta oo kulaylka qaybaha xasaasi ah ku absorber iyo yareeyaan xaddiga gaaska, markaa si ay kordhaan waqtiga joogitaanka ee absorber ah.
Qaybtan waxa loo isticmaalaa si loo soo saaro particulates, chlorides, ama labadaba ka gaaska qiiqa.
Tani waxay sida caadiga ah waa noobiyad furan buufis keenta slurry scrubber xiriir la gaaska qiiqa, jidaynayey falcelinta kiimikada in xidhxidhaan meesha SO 2 in ay qaataan in sump ah.
munaaradaha qaarkood waxay leeyihiin qaybta xirxirida ah. In qaybtan, slurry la faafin on xirxirida dabacsan ama habaysan si ay u kordhiyaan dusha xiriir la gaaska qiiqa.
munaaradaha qaarkood waxay leeyihiin saxan dalool kor ku xusan qaybta absorber ah. Slurry lagu shubo siman on this saxan, taas oo labada dheelitiraysa socodka gaaska iyo bixisaa bedka xiriir la gaaska.
All hababka qoyan FGD dhalin boqolkiiba gaar ah oo dhibco aad u wanaagsan in la fuliyaa by dhaqdhaqaaqa gaaska qiiqa xagga bixitaanka munaaraddii. eliminator ceeryaamo waa taxane ah oo vanes convoluted dabin iyo degayaa dhibco, taasoo u ogolaatay in lagu soo laabtay nidaamka. Si ay u joogteeyaan-oolnimada saarista qoyaanka sare, ka vanes eliminator ceeryaamo waa in la xilliyo gaar la nadiifiyaa.
koorta Hollow Tangential dhici TH Taxanaha
• Taxanaha of nozzles xagal xaq u isticmaalayo tubada a tangential in ay soo saaraan ku dhici ee
• xidhmin u adkaysta: nozzles lahayn gudaha
• dhismaha: shubay hal-piece
• xiriir: flanged ama dhaddig, NPT ama BSP threads
• Aad iyo xataa buufin qaybinta
• nidaamyada bifbaafka: koorta godkii
• xaglo bifbaafka: 70 ° 120 °
• Sicirka Flow: 5 ilaa 1500 gpm (15.3 in 2230 l / min)
Iyada oo tirada gaarka ah si ay ula kulmaan aad caddaymaha saxda ah
Full biiyaha koorta muquuninta
ST, STXP, TF, TFXP Taxanaha
• The biiyaha muquuninta asalka ah
• xawaare dheecaan Sare
• tamarta Sare
• xidhmin u adkaysta: dhismaha hal xabbad oo aan lahayn qaybo gudaha
• dhismaha, mid, laba ama saddex shubay-piece
• xiriir: NPT ama threads BSP caadiga ah lab la xidhiidha, threads dumar ah oo la xidhiidha flanged heli by si gaar ah
• hannaankii bifbaafka: koorta buuxa iyo godkii
• Sicirka Flow: 0.5 in 3320 gpm (2.26 in 10700 l / min) Heerka socodka sare laga heli karaa
Waxyaabaha: Reaction addoonsi Silicon Carbide (RBSC)
Cabirada: 0.75 inch, 1.2 inch, 1.5 inch, 2 inch, 2.5 inch, 3 inch, 3.5 inch, 4 inch, 4.5 inch iyo si waafaqsan shuruudaha gaarka ah.
Previous: Silicon biiyaha carbide, flanged
Next: jihada kaliya Desulphurizing biiyaha
FGD Buufiyo Scrubber biiyaha
nozzles bifbaafka koorta Full
biiyaha bifbaafka Jet Full
Hollow koorta muquuninta Buufiyo biiyaha
Hollow koorta Buufiyo nozzles
RBSiC muquuninta buufin biiyaha
Silicon Carbide biiyaha bifbaafka
Sillicon Carbide muquuninta buufin biiyaha
Solid biiyaha bifbaafka koorta
muquuninta Full koorta buufin biiyaha
muquuninta Full koorta Buufiyo nozzles
Buufiyo Fan Water Jet biiyaha
Uubo Silicon Carbide biiyaha bifbaafka
biiyaha bifbaafka Uubo
Gudaha xigay xidhnayn biiyaha buufiyo RBSC
Uubo DN40 koorta godkii biiyaha carbide Silicon
1.5 inch biiyaha bifbaafka
Uubo biiyaha koorta godkii
Silicon biiyaha desulfurization carbide